Zimbabwean anti-riot police load civilians onto a truck as they patrol the streets of Harare on August 16, 2019, after the High Court upheld a police ban on protests and march planned by the main opposition party over worsening economic conditions in the country. Riot police in Zimbabwe fire teargas and beat demonstrators on August 16 during a crackdown on opposition supporters who have taken to Harare’s streets despite a protest ban. Scores of people gathered in the capital’s Africa Unity Square to demonstrate against the country’s worsening economy in defiance of the ban, which was upheld by a court on August 16.Jekesai NJIKIZANA / AFP
The chief who is highly revered in the western Matabeleland region of the country was last week jailed for 18 months for allegedly destroying a villager’s property.
Friday’s protests were the first since President Emmerson Mnangagwa’s decision to hike fuel prices by more than 100 percent sparked nationwide demonstrations in January which left at least 17 people dead and several injured when soldiers opened fire.
Mnangagwa took over from long-time ruler Robert Mugabe and then won disputed elections in July last year vowing to revive the economy.
Tags: ZimbabweZimbabwean police